ရခိုင်နယ်မှာလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှု့စတင်ခဲ့တဲ့ (ခွေးသူတောင်းစား )ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရခိုင်နယ်မှာလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှု့စတင်ခဲ့တဲ့ (ခွေးသူတောင်းစား )ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်
ရခိုင်နယ်မှာလူမျိုးရေးအကြမ်းဖက်မှု့စတင်ခဲ့တဲ့ (ခွေးသူတောင်းစား )ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်
Posted by koyinmaung on Jun 10, 2012 in Copy/Paste | 21 comments
ကျောက်နီမှော်ကျေးရွာမှ မသီတာထွေးကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့သည့် တရားခံ ရော်ရှီး (ခေါ်) ထက်ထက်သည် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါသည်။
တကယ်ဆိုရင် မသေမချင်း လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ်မသတ်လိုက်ရတာ နာလေခြင်းနော်။
အဲ့ဒီသတင်းကို ကြားမိတယ် အိုင်ပီ ကိုရင်မောင်ရေ…
အတော့်စဉ်းစားစရာပဲဗျို့..။ (အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ထောင်ဝါဒါတွေကြားက)
အမှုဆက်အစစ်ခံရင် လူမျိုး ဘာသာ အတွက်လည်း ရှူပ်စရာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ကွင်းဆက်တွေကိုတော့ ကျနော် တော်တော်ဆက်မိလာပါပြီ။
ပြည်ထဲရေးက အကောင်းဆုံး အကွက်တစ်ခုဖန်တီးပြီး
zသိမ်းလှအောင် လုပ်နေပုံပဲ အိုင်ပီရေ့…
ဒီကောင့်ကို ဖမ်းတော့ဒေသခံမွတ်စလင်မ်များအကူအညီပေးပြီး ဝိုင်းဖမ်းကြတာ၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်ူအရ ရိုက်နှက်စစ်ကြောတော့လဲ ဝန်မခံတာ၊ခုတခါ သေသွားပါ
တယ် အသံထွက်လာတာ လွဲနေပီ၊လွဲနေပီ။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်ထူးတာလေးတွေ ကြားရရင်လဲ ထပ်ပြောပေးပါဦး ခင်ဗျ ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေ တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုတော့ ဘဝင်မကျဘူးဗျာ ။
လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီးမှ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတ်သေတာမျိုး…
အသေ ခံဗုံး ခွဲသလို မျိုး သေ ရင် အလာ ဆီ ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ သူ့ ရဲ့ နောက် ကွယ် က စနစ်တကျ အစီ အစဉ် ချ ကြိုးကိုင်နေတဲ့ ဆရာကြီးတွေ ရဲ့ ဘာသာရေးမှိုင်းကြောင့် လို့ ထင်ပါတယ် ခုတော့ ငရဲ ပြည်ရောက်နေရှာပါဘီ…..:) မတန် လိုက်တာ လွယ်လွယ်နဲ့ သေ သွားတာ
ကျုပ်အထင် ( အထင် )
အဲ့သည်ဒေသတာဝန်ရှိသူ ( အကောင်ကြီးကြီးတွေ )
ဒီကိစ္စဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ရှိတယ်လို့ထင်မိဘာဒယ် ( အထင် )
အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ တောင်ကျော်ဘတ် လို့ခေါ်တဲ့
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ နေလာတာ ကြာလာတဲ့အခါ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်လေးပါ
ရော့ သဂျီး ( ခြောက်ရာကျုပ် ) ဆဲရင်ပိုက်ဆံနှုတ်မယ်ဆိုဒဲ့အတွက် ပိုက်ဆံပေးပြီးဆဲတာ
ခု ဒီမအေလိုးတွေက အကြောင်းကြောင်းကြောင့်
တစ်ခြားနေရာကနေလွင့်လာပြီး လီးလာဖြစ်နောလား ( ရော့ နောက်ထပ်ခြောက်ရာ )
ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို ကျုပ်တို့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး မရောစွက်စေသဘဲ
အဲ့သည်မအေလိုး ( ကုန်ဘာဘီဗျ ကျုပ်စီးဇိမ်ဒွေ ) တွေကို ဘုံရန်သူသဘောထားပြီး
တေဂျင်းဂျိုး ကာလနာ မြွေဗွေးကိုက်ဒဂျီး
နောက်ဘဝ နတ်သားတစ်ဖက် ငါးထောင်နဲ့ နတ်သမီးဖြစ်ဘာဇေ
အမလေးးးးးးးးး ပိုက်ဆံပေးပြီး ဆဲနေတယ်ဗျ။ဟီးးးးးးနောက်တာပါ။
နောက်ကွယ်မှာ ဘာလျှို့ ဝှက်ချက်တွေရှိနေတာလဲ—
နဂို ကတည်း၊သည်ကောင်တွေအတွက်လဘ်ထိုးပြီး၊အမှုပေါ့အောင်ကုလားအဖွဲ့မှ ငွေထုတ်နှင့် လိုက်နေ တယ် သတင်းထွက်နေရတဲ့အထဲ၊ကဗ္ဘာသိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ သည်အမှုတရားခံတစ်ယောက်၊ သည်လိုဇတ် သိမ်း တာဘာ့ကြောင့်လည်း၊ အသေပြပြီးထွက်ခိုင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်သလား။
သေတဲ့ဆိုတဲ့ တရားခံ ကုလားနောက်ခံဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါတ်သက်နိုင်သလည်း၊ သူသေပြီးမြေမြှုပ် လိုက် တယ်ဆို ဘာမှကွင်းဆက်မရှိတော့ဘူး။
သေတာကိုဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းရှိပါတယ်ဆိုတာလောက်က၊ကလေးကစားတာပါပဲ။နိုင်ငံတစ်ကာကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ သေတာတစ်ကယ်ဟုတ်/မဟုတ်အတည်ပြုသင့်တယ်၊ဒါမှ ပြည်သူလက်ခံမှာပဲ။
သူတို့ဟာယုတ်ညံ့လွန်းလို့ အပစ်ကျပြီးသာ တရားဝင်သေသင့်တယ်၊ထောင်အရေးပိုင်တွေ နဲ့၊ပြည် ထဲရေး မှာတာဝန်လုံးဝရှိတယ်၊ သည်ဖြစ်ရပ်တစ်ကယ် အမှန်ဟုတ်ရဲ့လား၊ပြည်သူကိုသက်ေ သ ခိုင် လုံအောင်ပြသင့်တယ်။
ငါအတ္တအစွဲတွေနဲ့ သွေးပူနေတုန်း ဆင်ခြင်တုံမဲ့ လုပ်ကြပီး နောင်ကြမှ သမိုင်းမှာ အမဲစက်ထင်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကမ္ဘာမှာ အများဂျီးရှိဒယ်…။ ရင်လေးဒယ်ဟေ့….
ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရလား၊ ဒါသက်သက် သတင်းလွှင့်လိုက်တာများလား၊
လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေတာနဲ့ ပြီးရောလား။
အရင်တုန်းက ကြားဖူးတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေတဲ့သူကို ၀ိဥာဉ်ကို ထောင်ချထားတယ်တဲ့
မြန်မာ့အသံမှာ ပါသွားတယ်နော် ..
ဖင်ယားနေတဲ့ မအလ တွေ
ဤကာလနာမြွေပွေးကိုက်သည်ကား အဝီဇီသို့ဇောက်ထိုးဆင်းရမည်သာတည်း ။
10-6-2012 ညနေ ၅ နာရီအချိန်တွင် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဇွန်ပန်းချိုင်ကျေးရွာအနီးမှ တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးသော စက်လှေ(၆၀)ခန့်ဖြတ်သန်းသွားပြီး ကျောက်ဖြူမြို့အနီးရှိကျွန်းစုများတွင်ပျောက်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။သတင်းကိုဇွန်ပန်းချိုင်ကျေးရွာမှပေးပို့ပြီးအတိအကျမြင်လိုက်ရသည်ဟုပြောပါသည်။
ဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာလဲပါလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီကောင် ချောသွားပါပြီ။ သူ့ပုဆိုးကို ကြိုးလုပ်ပြီး ကြိုးဆွဲချသေတာဆိုပဲ။ ဒီကောင်သေတာတောင် လူတွေကို ဖင်လှန်ပြသွားသေးတယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်
He go to hell surely.
အဲဒီလို ယုတ်ညံ့တဲ့ လူတစ်ယောက် သေသွားတော့ ဘာပဲပြောပြော လောကကြီးအတွက် ကောင်းသွားတာပေါ့။ မကောင်းတာကတော့ သူမွှေးခဲ့တဲ့ မီးပဲ။ အဲဒီမီးကြောင့် လူပေါင်းများစွာ အသက်ပျောက်နေရတယ်။
သေချာပါတယ်။ အဲဒီကောင် ငရဲအိုးဆီကို ဇောက်ထိုးသွားမှာပါ။